Times Of Nepali » मन थामेर पढ्नुहोस एक आमाले छोरालाइ लेखेको चिट्ठीले सारालाइ रुवायो
25 04 19 |
मन थामेर पढ्नुहोस एक आमाले छोरालाइ लेखेको चिट्ठीले सारालाइ रुवायो
दुई मिनेट लगाएर अवश्य पढ्नुहोला! अनि शेयर गरेर पढ्ने मौका अवश्य दिनु होला! आमा को चिठी पढेर तपाईंको मन रुने छ
मरेँ हुँला तिम्रो मायालु अनुहार हेर्न नपाएर अनि तिमीलाई मेरो नजरको वरिपरि देख्न नपाएर
मेरो प्यारो छोरा सन्तानको माया कस्तो हुन्छ भन्ने त यतिबेलासम्म तिमीले थाहा पाईसक्यौ होला नि है। तिमीले मलाई वृद्धाश्रम लग्ने बेला बुहारी दुई जीउकी थिईन् । आफ्नो मुटुको टुक्रा आफूदेखि अलग हुँदा कति पीडा हुन्छ, त्यो कुरा तिमीले बुझिसक्यौ होला । म पनि तिम्रै यादले गर्दा आजसम्म बाँचेकी छु । एकमुठी स्वास फ़ेर्न सकेकी छु । मलाई आशा छ, म मर्ने बेलासम्म तिम्रो अनुहार हेर्न पाउनेछु ।
तिमीले मलाई छाडेको वृद्धाश्रममा म अटाइन छोरा । किनकी म भन्दा धेरै दु:खी आमाहरु थिए त्यहाँ । जसको यस संसारमा कोही थिएनन् । मेरो त तिमी छौ, बुहारी छिन् र नाती पनि छ रे भन्ने सुनेकी छु । त्यसैले म आफैँ त्यो तिमीले छाडेको बृद्धाश्रम छाडेर बाहिर सड़क पेटीमा आएँ छोरा । सड़कको जीवन त मलाई त्यति कठोर भएन, जति तिम्रो यादले पीडा भो । तिमी मेरो पेटमा हुँदादेखि मलाई यहाँ छोड्नेबेलासम्म मैले तिमीसँग बिताएका पलहरु ओढेरै बाँचे, तिम्रा मायाहरु खाएरै बाँचे । कहिलेकाहीँ कुनै पवित्र मनले केही खानेकुरा दिँदा पनि मलाई कतै तिमी भोकै पो छौ कि भन्ने पीडा हुन्छ छोरा । आमाको मन कस्तो हुन्छ, एकपटक बुहारीसंग सोध ल भर्खरै जन्मेको बाबुको तिमीलाई माया कति लाग्छ भनेर ?
तिमीले बुहारीको लहलहैमा लागेर मलाई त्याग्यौ, यसमा मलाई केहि दु:ख लागेको छैन । मेरोलागि त तिमीभन्दा अमूल्य सम्पत्ति अरु के नै थियो र ? एक वचन जा भनेको भए मेरो जीवन नै तिम्रो नाममा त्यागिदिन्थेँ । किनकि तिम्रो बाबा स्वर्गे भएपछि यो संसारमा तिमीमात्र त छौ मेरो भन्ने । आफूले माया गर्ने मान्छेले दिएका पीडा पनि कति मिठो लाग्दो रहेछ । उपहास पनि सुमधुर हुँदो रहेछ । म सबै यातना चुपचाप सहन तयारै थिएँ । मैले राम्रो लुगा र मिठो खाना पनि त मागेकी थिईन । तर मलाई घरबाट निकाल्ने फ़ैसला गरेछौ । तिम्रो एउटा तस्बिरसम्म भएको भए त्यही हेरेर चित्त बुझाउँथे होला, त्यहि पनि बुहारीले निकालिदिईछिन् । अब त तिमीलाई थाहा भईसक्यो होला आफ्नो सन्तानले गरेको हरेक कुरा सह्य हुन्छ आमा-बाबुलाई होइन र ?
मलाई माफ गर बाबू
मैले बुहारीलेजस्तै आधुनिक बोल्न जानिनँ । उनलेजस्तै मिठो पकाउन सकिनँ । म सफा सुघ्घर बस्न सकिनँ । मैले कुपोषित शरीरले पाएको सजाय दम र खोकी रोक्न सकिन, म बूढी भएँ । मत खोले खाएर, भुल्ला ओढेर हुर्केकी मान्छे, तिमी सानो छँदा तिमीलाई मागेरै भएपनि मिठो खुवाएर हुर्काएँ । तिम्रो बाबा तिमी पेटमा हुँदादेखि परदेशिएर पाँच वर्षसम्म बेखवर हुँदा पनि मैले तिमीलाई कहिल्यै भोकै राखिनँ । मेरो छाति सिस्नोको खोलेले पनि भरिएकै थियो । रसाएकै थियो ।
हो बाबू म धेरैपल्ट मरेर पनि बाँचें । किनकि मलाई भोक लाग्दा तिमी भोकाएको देख्छु । प्यास लाग्दा तिमी तिर्खायौ कि भनेर झस्किन्छु । म पीडाले कराउन सक्दिन छोरा । किनकी म कराउँदा पनि तिमीलाई दुख्छजस्तो लाग्छ । हो छोरा, यो आमाको मन अचम्मको हुने रहेछबाबु पोहोरको वैशाखमा आमाको मुख हेर्ने दिन थियो, सबैका छोरा-छोरी आए, तर तिमी आएनौ । छोरा ठिक गर्यौ, जाबो एक दिन भेटेर अनि मिठो खुवाएर के हुन्थ्यो र ? जाबो एकसरो लुगा दिएर अनि एकपटक आमा भनेर के हुन्थ्यो र कमसेकम देखावटी स्वाङ त पारेनौ।
मलाई थाहा छ, तिमीले मनको एउटा कुनाले पक्कै सम्झ्यौ होला, तर मैले त हरेक स्वास र कसैले दिएको गाँसमा पनि यो शरीर लाश नहुन्जेल सम्झिरहनेछु छोरा । मैले भुलेकि छैन, तिमीले मलाई कति धेरै माया गर्थ्यौ सानोमा । बाटोमा भेटाएको काफलगेडी पनि मलाई दिएरै खान्थ्यौ । मेरो जूठो नखाएसम्म तिमी अघाउँदैनथ्यौ । अहिले सायद माया सकियो होला क्यारे, सकिएपछि यसमा तिम्रो के दोष होइन र ? बाँकी नै नभएपछि त के दिनु है ?
यो स्वार्थी संसारमा तिमीमात्र होइन, धेरै यस्ता छोराछोरी छन रे अचेल । त्यसैले सूर्ता नमान्नू है, बरु आफ्नो ख़्याल राख्नु । तिमीले कहिल्यै समयमा खाना खाँदैनथ्यौ । मैले हरेकचोटी मुटु धड्किदा तिमीलाईबाहेक अरुलाई सम्झिन्न । मेरो यो संसारमा अरु को नै छ र छोरा ? तिमीलाई पक्कै दिनभरि बाडुली लाग्दा कति गाह्रो हुँदो हो है, के गर्नु छोरा मेरो यति अधिकार त नखोस न है । म सायद धेरै बाँच्दिन होला छोरा, तिमीलाई थाहा छैन होला भोको पेटमा बोरा ओढेर सड़कसंग सुत्नुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर । हिजो हाम्रो फुसे घरको छानु पुसे झरीमा चुहिँदा मेरो छाती ओढाएरै तिमीलाई बचाएको कुरा तिमीलाई थाहा छैन छोरा ।
मेरो छोरा अब त नाती पनि बाबा-मम्मी भन्ने भयो होला । तिमीहरुले ठिक गर्‍यौ मलाई घरबाट निकालेर । नत्र नातीले भोलि जान्ने भएपछि बुहारीले मलाई गरेको माया देखेर त्यहि सिको गर्ने थियो, अनि तिमीहरुलाई भोलि बुढेसकालमा मैलेजस्तै सडकको या वृद्धाश्रमको बास बस्नुपर्ने हुन के बेर ! आफ्नै सन्तान सडकमा भीख मागेको म हेर्न सक्दिन छोरा । म आफू जस्तोसुकै पीडा खप्न तयार छु, तर तिमीलाई सडकमा बोराभित्रको जिन्दगी बाँचेको हेर्न त के कल्पनासम्म गर्न सक्दिन । बुहारीको मन पनि नदुखाउनु है छोरा । उनी पनि कसैकी छोरी हुन्, मैले तिमीलाई जन्माउँदाजस्तै पीडा सहेर जन्माए-हुर्काएकी । हेरन, आफ्ना सबै आफन्त छाडेर सर्वस्व तिमीलाई नै सुम्पेकी छिन् ।
अन्तमा आज फेरि आमाको मुख हेर्ने दिन भन्ने सुनेकी छु, शरीरभरिका घाउहरु र अन्तर्मनका घाउहरु बेजोड़संग दुखिरहेका छन् । तिम्रो बाटो हेर्दा र्दै मेरा आँखा थाकिसकेका छन् । मैले कालसंग पनि दयाको भीख मागेकी छु, मर्नुभन्दा अघि केवल एकपल्ट तिमीलाई हेरेरै मर्ने रहर छ । मलाई दागबत्ती दिनुपर्दैन छोरा बरु भोकाएका गिद्ध र स्यालहरुलाई खान दिनु । किनकी भोकको पीडा कस्तो हुन्छ, तिमीलाई भन्दा मलाई थाहा छ । तिमी जहाँ भएपनि काँडाले नघोचोस् । कुनै रोगले नभेटोस् । अर्को जन्म हुनेरहेछ भने तिमीलाई मेरै कोखमा जन्माउन पाऊँ, किनकी तिमीलाई मैले गर्ने मायाको धीत मरेकै छैन । तर मलाई अर्को जन्ममा घरबाट ननिकाल्नु है ।
बाटो पारी तिमीजस्तै अनुहार देखिरहेकी छु, तिम्रो आगमन महशुस गरिरहेकी छु छोरा । आमा हुँ नि म । मलाई थाहा छ, तिमी दुनियाँको लाजले होइन, मेरै मायाले डोहोर्‍याएर आउँदैछौ । तर मेरो एक मुठी प्राण जानै लाग्यो छोरा । कहीँ कतै मलाई मरेकै देख्यौ भने पनि आँसु नझार्नु है, म मेरो आफ्नै मुटुको टुक्रा रोएको देख्न सक्दिन । बस् मलाई एकपटक आमा मात्र भन्नु, मेरो आत्मले शान्ति पाउनेछ । अर्को जुनीमा भेट्ने आशामा मृत्यु कुरिरहेकी छु ।
आमा पेजबाट साभार
प्रकाशित मिति April 25, 2019
राष्ट्रपति कार्यालयमा पूराना फालेर एक करोडको नयाँ गलैँचा राखिँदै
जनमत : अब राजाकाे तस्वीर भएको नोट चलनचल्तीमा नआउने, राष्ट्र बैंककाे निर्देशन ठिक कि बेठिक ?
वर्षा राउतको चर्को विरोध ( उत्तर दिईन कारण यस्तो) हेर्नुहोस / भिडियो
आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण नायिका वर्षा राउतको सामाजिक सन्जालमा चर्को बि’रोध (भिडियो )
नेपालको भूमि फिर्ता गर भन्दै मोदीलाई करोडौ इमेल पठाउने अभियानमा सहभागी बनौ ।
न्यूज ट्वान्टीफोरको बढ्दो लोकप्रियता, २० लाख सस्क्राइबर हुने नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल बन्यो
ब्रेकिङ्ग: पुर्ब युवाराज पारस चढेको गाडी दुर्घटना
कोरोना परिक्षणको लागि प्रयोगशाला जान नपर्ने, अब २० मिनेटमै परीक्षण
कतारमा मृ’त्युद’ण्ड दिइएका अनिलको अन्तिम फोन, मलाई आजै सुट गर्दैछ
नेकपा सचिवालयमा ‘एमसीसी’को विपक्षमा ‘दुई तिहाई’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पठाए ओली सरकारलाई नै यस्तो कडा सन्देश, अब के होला ? सक्दो सेयर गरौं !!
घनश्याम भुसालले तोडे मन्त्री हुँदा गर्नुपर्ने चलन, जीवनमै पहिलोपटक मन्त्री बनेपछि के भने ?
सिमाना मिच्ने भारत र चीनलाई पनि छोडिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जंगिदै भने : ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौ